Faalo kusaabsan koobka aduunka Maalmaha kaharay iyo Garoomada lagu dheeli doono | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Faalo kusaabsan koobka aduunka Maalmaha kaharay iyo Garoomada lagu dheeli doono
Published on May 19, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(20-5-2018) labaatan iyo lix Maalmood oo kali ah ayaa innaga xiga maalinta loo asteeyey in uu dalka Ruushka si rasmi ah uga furmo tartanka koobka kubadda cagta adduunka ee 2018 kaasi oo durba xummadiisu dunida qabanayso dalal badan oo adduunka ahna si weyn looga dhur sugayo.
Garoomada waaweyn eek u kala yaalla Magaalooyinka waaweyn ee dalka Ruushka oo ka mid ah dalalka adduunka ugu quwadda weyn uguna xadaaradda durugsan ayaa waxa isku haleeli doona 32 kooxood oo loo qaybiyey 4 kooxood waxaana la sheegayaa in diyaar garawgu meel wanaagsan marayo iyada oo dad badan oo aanay u suurto galin in ay Russia u safraan aad u xiisaynayaan in ay mar uun shaashadaha kala socdaan koobka ugu xiisaha badan tartamada isboorti ee adduunka.
muuqaalka garoomada Koobka Adduunka lagu qabanayoKubadda Cagta oo ah tan ugu shacbiyadda badan adduunka ayaa waxa sannadkan si gaar ah koobkeeda adduunka xiisahiisa u sii kordhinaya dagaalka ay koobkan u gali doonaan dalalka Brazil, England, Germany, Spain, France, iyo Argentine oo wata xiddigo waaweyn oo ay mar walba ka filan karaan in ay guusha koobka u horseedaan.
Garoomada lagu ciyaarayo koobka kubadd acagta adduunka ayaa si weyn loo diyaariyey oo habaysan iyada oo shalay ay FIFA sheegtay in Moscow diyaar gaarwgii ugu wanaagsanaa ay ku samaysay qabashada maxfalka weyn ee caalamiga ah.
Xiddigo waaweyn oo koobkan dhaawac uga maqnaan doona ka sokow waxa iyana dhibaato ka taagan tahay xiddigo dhawr ah oo ay macalimiintoodu ka tageen iyaga oo aan ku soo darsan liiskooda kama dambaysta ah. Macalimiinta Dalalka Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa shalay iyo dorraad soo kala saaray liisaskoodii ugu dambeeyey ee ay u kaxaysanayaan dhinacaa iyo dalka qabawga ee lagu naanayso Peer.
Rabiot iyo Wagner oo u kala shashay Faransiiska iyo Jarmalka ayaa la yaabay sida ay macalimiintoodu uga yimaaddeen ee aanay ugu soo darsan liiskoodu. Waxa kale oo taageerayaasha Faransiisku aad uga naxeen dhaawacii uu Payet ku seegay koobkan isaga oo dhaawacmay kulankii Europa League.